सबैभन्दा सामान्य तर महँगो बिक्री गल्तीहरू बेवास्ता गर्न - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक मार्च 3, 2021 मार्च 2, 2021 mwaleeds अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
योजनाको विकासमा बिक्री प्रतिनिधि संलग्न गर्नुहोस्।
यो योजना बनाउनको लागि मानक अभ्यास हुनु हुँदैन र त्यसपछि यसको बारे बिर्सनु हुँदैन।
एक सफल बिक्री योजना परिणाम र गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ।
मानिसहरूले समाधान खरीद गर्छन्, उत्पाद होइन।
सर्वप्रथम, तपाईंले अनुहार-देखि-बैठकका लागि आफ्नो स्तर उत्तम तयारी गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईं धेरै दुर्घटनाहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ, र उत्तम हो यदि तपाईं समस्याहरूको बारेमा पहिल्यै सचेत हुनुहुन्छ भने। हामी सफा होऔं र प्राय: गल्तीहरू बिक्री प्रतिनिधि बनाउनेहरूको बारेमा कुरा गरौं। यी गल्तीहरू सम्झौता बन्द गर्ने र हराउने बिचको निर्णायक कारक हुन्।
कुनै बिक्री योजना छैन
एउटा सबैभन्दा साधारण बिक्री ब्यवस्थापन गल्तीको बिक्री टोली प्रबन्ध गर्न मद्दतको लागि बिक्री योजना छैन। एक संगठित र राम्रो-तैयार बिक्री प्रवाहको लागि उचित योजना, ट्र्याकिंग, र लक्षित परिणामहरू प्राप्त गर्न सबै कार्यहरूको समीक्षा आवश्यक पर्दछ। टोली भित्र, प्रत्येक विक्रेतासँग ग्राहकहरुसँग व्यक्तिगत रूपमा व्यवहार गर्न उनीहरूको कार्य योजना हुनुपर्दछ। यसले टोली सदस्यहरूका बीच उत्तरदायित्व र उत्तरदायित्वको भावना सिर्जना गर्दछ।
एक प्रभावी बिक्री योजनामा ​​लगानी गर्न, निम्न आवश्यकताहरू विचार गर्नुहोस्।
योजनाको विकासको लागि बिक्री प्रतिनिधिमण्डल संलग्न गर्नुहोस्: यदि प्रबन्धकले कार्यको जिम्मेवारी लिन्छ भने, यो व्यक्तिहरूको लागि स्पष्ट हुँदैन जुन उनीहरू आफैंमा योजना बनाउँदछन्। प्राय योजना विफलताको मुख्य कारण पनि यही हो। योजनाको सफलताको उच्च स्तर सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिलाई योजनाको विकास गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सही उद्देश्यहरूतर्फ डो guide्याउनुहोस्।
नियमित रिपोर्टिंगमा ध्यान दिनुहोस्: यो योजना बनाउनको लागि मानक अभ्यास हुनु हुँदैन र त्यसपछि यसको बारे बिर्सनु हुँदैन। यी योजनाहरूको छोटो अवधिको लक्ष्यहरू हुनुपर्दछ र योजना चक्रमा लचिलोपन प्रदान गर्न प्रत्येक हप्ता स्थापना गर्नुपर्दछ। प्रत्येक दिन नतिजा समीक्षा गर्न बर्बाद नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा, प्रत्येक हप्ता यो गर्नुहोस् लुओफोल र हराएको अवसरहरू पत्ता लगाउन।
सबै बिक्री मेट्रिक्स को पहिचान गर्नुहोस्: एक सफल बिक्री योजना परिणाम र गतिविधिहरु मा केन्द्रित छ। छलफल गर्नुहोस् र नोट गर्नुहोस् तपाईंको व्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्न सबै आवश्यक बिक्री मेट्रिक्स। यो ग्राहक फोन को एक नम्बर को सेट गरीएको हुन सक्छ, ग्राहक सूचिको भाग, नियुक्ति तालिका, र बिक्री बन्द। केहि उपायहरु मा केन्द्रित गर्नुहोस् जुन तपाईको ब्यापारको लागि सब भन्दा बढी महत्व राख्छ।
एक पुरानो बिक्री पिच दिने
यो २०२१ हो! तपाइँको पुरानो चेइसी बिक्री पिच कसैले पनि सुन्न चाहँदैन। तपाईं आफ्नो सेवाहरू बेच्न सक्नुहुन्न बासी पिचलाई पुन: स्थापित गरेर तिनीहरूको लागि वा अनुकूलित छैन। के एक व्यक्ति चाहान्छ कि केहि छ जुन केवल उसका लागि मात्र हो। तपाईंको उद्देश्य उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्दछ। तपाईंको ग्राहकहरूको आवश्यकताहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूको चुनौतीहरू बुझ्नुहोस्, र उनीहरूको आवश्यकताहरूको बारेमा सिक्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यो जानकारी थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनहरू / सेवाहरूमा बेच्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै तपाईले आफैंको लागि एक सीमा सेट गर्नु पर्छ। सम्भावित ग्राहकहरूलाई धेरै जानकारी प्रस्ताव गर्ने बेवास्ता गर्नुहोस्। सबै समयमा ओभरलल गर्न कोशिस नगर्नुहोस् किनभने यदि तपाईं धेरै धक्कामुक्त हुनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै मानिसहरूलाई बन्द गर्नुहुनेछ।
डेटि thing चीजको रूपमा बिक्रीको बारे सोच्नुहोस्। तपाईं असाध्यै निराश हुन सक्नुहुन्न र एकै चीजमा सबै प्राप्त गर्न कोशिस गर्नुहोस्, तर अझै पनि, तपाईं आकर्षक देखिनु पर्छ। तपाईं आफ्नो बिक्री विधिका साथ अलि सजिलो हुनुपर्दछ र कार्य गर्नुहोस् जस्तो कि तपाईं अर्को व्यक्तिलाई सूचित गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंको ग्राहक यस समय व्यस्त छ, तिनीहरूलाई भेट्न को लागी सेट अप गर्न लिंक छोड्नुहोस्। चिन्ता नलिनुहोस्, एक अनलाइन नियुक्ति तालिका सफ्टवेयर वाaमर्मत पसल POS सफ्टवेयर यो तपाइँको लागि गर्न सक्छ। दिनको अन्त्यमा, यदि तपाईंको उत्पादन वा सेवा पर्याप्त राम्रो छ भने, तपाईंले बिक्री गरिरहनु भएको व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सुविधा पाउनु पर्छ। यदि तपाईं कुनै पनि ग्राहकसँग अनलाइन व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई तपाईंको कम्पनी वेबसाइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
एउटा सबैभन्दा साधारण बिक्री ब्यवस्थापन गल्तीको बिक्री टोली प्रबन्ध गर्न मद्दतको लागि बिक्री योजना छैन।
यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो केवल चीजहरूको बाहिर पर्खनुको सट्टा हतारमा चीजहरू गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि बिक्री बन्द गर्न तत्कालको भावना सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यस्तो लाग्दैन कि तपाई ओभरसेलिंग गर्दै हुनुहुन्छ।
चाँडै मूल्य निर्धारणको बारेमा छलफल गर्दै
मानिसहरूले समाधान खरीद गर्छन्, उत्पाद होइन। यदि तपाईं कम मूल्यहरुमा छलफल गरेर ग्राहक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाई भ्रममा फस्नुहुनेछ।
यहाँ सुझाव छ, बिक्री कलको पहिलो तेस्रोमा मूल्य निर्धारणको बारेमा कुरा नगर्नुहोस्। हाम्रो डाटा यसमा ठ्याक्कै छ।
शीर्ष-प्रदर्शन बिक्री प्रतिनिधि लामो कलमा मूल्य निर्धारण को बारे मा कुरा। लगभग १ घण्टा लाग्ने कलहरू, 1 45 मिनेट पछि, मूल्य उल्लेख गरिएको छ। पहिलो १ minutes मिनेटमा मूल्य निर्धारणको बारेमा कुरा गर्ने व्यक्तिहरू यसलाई ठूलो चोटि उडाउँछन्। तिनीहरूको बिक्री संख्या कहीं पनी उपयोगीको रूपमा छैन। स Take्केत लिनुहोस्। मूल्य बोल्नु अघि मूल्य स्थापना गर्नुहोस्।
बिक्री बन्दको बारेमा भोग
अयोग्य विक्रेताहरू धेरै जसो ग्राहकहरू सेवा बन्द गरीरहेछन् वा सेवा बिना उत्पादन छोड्छन्। एउटा तथ्य यो हो कि विक्रेताले काम गरेनन्, र यो गर्न सकिन्थ्यो।
संकेतहरू बुझ्नुहोस् र अर्को फेरी सबै भन्दा सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। ग्राहक अधिक जान्नको लागि तयार छ वा जान्नको लागि खरीद पैटर्नहरू चिन्नुहोस् वा तपाईंबाट खरीद गर्ने विचार त्याग्न चाहनुहुन्छ। समापन चिन्ह हुन सक्छ, जस्तै, "के यो स्टकमा छ?" वा "के त्यहाँ डेलिभरी चार्ज छ?"
जब तपाईं त्यस्ता संकेतहरू देख्नुहुन्छ, बिक्री केवल कुनाको वरिपरि हो।
त्यसो भए, यहाँ केहि महत्वपूर्ण त्रुटिहरू छन् जुन प्रत्येक विक्रेताले गर्छ। निराश नहुनुहोस् यदि तपाईंले यी सामान्य बिक्री प्रतिनिधि गल्तीहरू गर्नुभयो भने। ठिकै छ। यो हामी सबै भन्दा राम्रो हुन्छ।
तर भविष्यको लागि, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईंले ती बेवास्ता गर्नुपर्दछ। तपाईं सचेत हुन र सुन्न, सम्भावित ग्राहकहरूलाई बेच्न, वास्तविक समस्याहरू पत्ता लगाउन र उम्मेदवारहरूसँग इमानदार हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो बिक्री नम्बरहरूमा सुधारहरू देख्न थाल्नु हुनेछ यो तपाईंलाई थाहा पाउनु अघि। भाग्यले साथ दिओस्!
सांप्रदायिक समाचार POS बिक्री बिक्री योजना र अनुगमन सफ्टवेयर प्रविधि
मुहम्मद वलीद एक उत्साही पेशेवर हुन् जसले आफ्नो अद्भुत लेखनको साथ समुदायको सेवा गर्न मन पराउँछन्। उसको विशेषज्ञता टेक्नोलोजी, सास व्यवसाय, वृद्धि ह्याकि,, र मार्केटि .मा छ।